पहिरो प्रभावित बस्ती स्थानान्तरण गर्न सुझाव
दोलखा-एक महिना अघि गएको पहिरोका कारण जुँगूको झगरेको बस्ती तत्काल सार्न भूगर्भविद्ले सुझाव दिएका छन् । २ हप्ताअघि स्थलगत अध्ययनपछिको विस्तृत प्रतिवेदनमा जुँगूका अन्य पहिरोपछिका बस्ती सर्नु नपर्ने भएपनि झगरेको बस्ती तत्काल सार्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो ।
गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नं.१ का विभिन्न ठाउँमा पहिरोपछि स्थानीय त्रसित बनेपछि गाँपालिकाले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनामा रहेका भूगर्भविद्हरुलाई पहिरोको अध्ययन गर्न आग्रह गरेको थियो । गाउँपालिका कार्यालय गुरुम्फीमा आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपानेले गाउँपालिका अध्यक्ष सोयमबहादुर खड्का र सम्बन्धित वडा अध्यक्ष झलककुमार कार्कीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका छन् ।
पहिरोका कारण २ दर्जन परिवारले घर छाडेका छन् । जुँगूमा दैनिक भारी वर्षा भइरहेको छ । वर्षापछि ठाडो खोला बढेर आउँदा स्थानीयहरु त्रसित छन् । पहिरोले बास नभएपछि कतिपय गाउँ नै छाडेर अन्यत्र गएका छन् ।
जुँगूको झगरेधारा, अफ्लेपू काफ्ले, यार्सा, राजपूमा ठाउँठाउँमा आएको पहिरोका कारण धेरै परिवार घर भएर पनि फर्कन सकेका छैनन् । पहिरोका कारण धेरै ठाउँ क्षति भएको र जमिन फाटेपछि गौरीशंकर गाउँपालिकाले भूगर्भविद्मार्फत उक्त स्थानको अध्ययन गराएको हो ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी नरकल्सल्ट–ल्याह्मेरमा कार्यरत वरिष्ठ भूगर्भविद् ज्योती केसीले ४ दिनसम्म लगाएर पहिरो क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेका थिए । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाका प्रवक्ता डा. न्यौपानेले भूकम्पपछि पनि आयोजनाका भूगर्भविद्मार्फत २ महिना लगाएर गरेको जिल्लाका जोखिमपूर्ण क्षेत्रको अध्ययन प्रतिवेदन तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा बुझाएको जानकारी दिए । प्रतिवेदन कार्यान्वयमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।
पहिरो क्षेत्रमा स्थानीयहरुको सहयोगमा उनले राजपू, बोजम्पू, साउने, लुकुवा, यार्सा बज्युस्थान, झगरेको पहिरोको अध्ययन गरेका थिए । वरिष्ठ भूगर्भविद् केसीले पहिरोले सबैभन्दा बढी क्षति भएको झगरेमा पुनः पहिरो आउन सक्ने भएकाले त्यहाँको बस्ती तत्कालै नजिकै सार्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए ।
‘अन्यत्र तत्कालै त्यस्तै जोखिम छैन, तर राजपू क्षेत्रको बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्नु पर्छ’ उनले भने ‘साउने डाँडामा पनि जमिन धेरै फाटेको छ, त्यसलाई निरन्तर अध्ययन गरिरहनु पर्छ ।’
साउनेमा फाटेको जमिन बढ्दै गएमा ठूलो पहिरो आउन सक्ने उनीहरुको अनुमान छ गौरीशंकर गाउँपालिका अध्यक्ष सोयमबहादुर खड्काले भूगर्भविद्को प्रतिवेदनका आधारमा योजनावद्ध विकास गर्ने बताए । उनले स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्ती तत्काल सुरक्षित ठाउँमा सार्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने र सडकलगायका विकासको काम पनि सोही आधारमा गर्ने बताए । पहिरोमा परी १८ वर्षिय युवा निसान खड्का र ५५ वर्षिया जगतबहादुर खत्री बेपत्ता भएका थिए ।